Sempena2September 1998
Changing New Lifts for Rifle Range Flats
[VIDEO & BERGAMBAR] PERKASA Ganggu Tazkirah Anwar Di Masjid - updated
U Wira Thu VS other good monks and monk authorities
Adik Ibrahim Ali Disaman RM1juta Kerana Memfitnah AKSB
မြန်မာ့ ဂုဏ်သိက္ခာတံခါး ကျိုးပေါက်ခြင်း (ကဗျာ)
[BERGAMBAR] Bas Jelajah Merdeka Tarik Perhatian Ramai, Hari Ini Di Pulau Pinang
Posted: 02 Sep 2012 09:41 AM PDT
I just realised time really fly real fast. Before I knew it, its already2September 2012.
And yesterday was 1 September. To the rest of the population, it's probably Teacher's Day. But to me, it marks one year of singlehood.
Yes. That guy broke up with me on the 31 August 2011 (concidentally). But all the better right? Make the counting part way easier. HAHA.
As promised, I spend more time on my schoolwork. With my beloved two girlfriends who accompanied me through the hard times stay throughout with me. No words can describe the bond we shared among us. It isafriendship built since 2005. And indeed we went through thick and thin together. I guess, other than my parents, those two know me inside out already.
Look at it this way. From Primary 1 to Primary 6. That is six years. But what are the chances of having the same two friends having the same class as you throughout, right from Primary 1? But with my two girls, its been the 7th year. Maybe in time to come, I may be meeting them lesser because we all choose same modules but different timing.
Really. What are best friends?
I once hadaex-boyfriend who asked me: Don't you need to go out with your girlfriends and have those girly talks?
Me: Huh?! I don't think me and my girlfriends would need it. Because we have reachedastage whereby we can NOT talk for months, but when we meet each other and talk, we don't feel anything missing. Afterall, we all know when holidays come, the3of us hardly chill out. We chiong work like nobody business. And it's actually harder to ask us out during our holidays than during school days.
I have been dating others. But nothing serious happened. When the prelims and study period came, we stayed back in school to study. And I mean waking up at 5am, reaching school at 6.45am. and then study all the way till say 9pm? It is seriously no joke. Physically its tiring, mentally its draining. Needless to say, the travelling part was taking hell lot of time.
And lovealil out of the way, my exams this time were finallyalot better than the previous two years. I am back to work at the same place. Occasionally cleaning the shit that other staff left for us to do. The pay rate isalittle better now. But I need to pave something out for myself in the coming5years.
I have been there as long as I know my two kakis, so you should know how much I treasure the place. How much memories were created and left. I am now giving tuition to two primary school girls. More stressful than the F&B job i should say, but sometimes the answers and replies from the two of them just scare all my stress away.
I picked up running again. The pain makes me feel alive. I joined my first marathon - 10km at the Standard Charted Marathon alone. Then I joined Nike Goddess Run – 5km with my girlfriends. Then I joined SHAPE Run – 10km with another girlfriend who missed the Nike Goddess. And finally, now I am preparing for my Adidas King of the Road coming up in October. My longest distance so far – 16.8km. I am not exactly confident of my timing, but heck, I AM GONNA CLEAR THIS FOR SURE!
I learnt to reward myself more. I finally bought my FCUK WATCH! I bought my COACH BAG (okay, I know I cant afford the real deal yet, so this one isachiong one. but I trust this spree organiser and I trust the quality as well.
and next up, i shall get my DKNY Green Apple! cant wait!
Posted: 02 Sep 2012 10:15 AM PDT
Posted: 02 Sep 2012 08:37 AM PDT
Sekarang setelah mati baru aku menyedari
Posted: 02 Sep 2012 08:07 AM PDT
由星洲日報大北馬于 2012年9月2日 22:19 · 发布
獎項 歌曲 組織／創作人
冠軍 繼續聆聽 DOREMI
亞軍 凡人 P.U.P.P.E.T
季軍 殺手風華絕代的正義 D-Music
最佳作詞 六月 陳淑子
最佳作曲 繼續聆聽 蘇勇傑、蘇勇順
最佳編曲 繼續聆聽 蘇勇傑、蘇勇順
最佳演繹 單身好 理大游子吟
創意樂手 單身好 許耀文
Posted: 02 Sep 2012 08:05 AM PDT
阿依淡區慶讚中元 阿依淡警局附近將發展 15戶獲賠遷壟尾
黃漢偉說，他如此向媒體公佈，並非要促曹智雄馬上批准，而是要將州政府向中央政府的申請"公開"（make it public）。
As reported in Sinchew National Page (full page)
Posted: 02 Sep 2012 08:16 AM PDT
Source: အမှန်အတိုင်း မြင်တတ်ပါစေ
ကျွန်တော်တို့ မွတ်စလင်မ်တွေ အထူးသဖြင့် ဦးကျော်ဆန်းပြောတဲ့ ပြည်တွင်းနေ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေရဲ့ ဗီဇစရိုက် အမူအကျင့်ကို ဖြတ်ခနဲ တွေးလိုက်မိရက်သား ဖြစ်သွားတာပါ။
အဲဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ ပြည်တွင်းနေ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ဆိုသူတွေဟာ လူမျိုးအလိုက် စိတ်နေသဘောထား။ အမူအကျင့် နဲ့ စရိုက် လက္ခဏာတွေကို ပြန်လည် ဆန်းစစ် လေ့လာသုံးသပ်မယ်ဆိုရင် …
မွတ်စလင်မ်တွေဟာ ဟိုးအရင် ပုဂံခေတ်ကစပြီး ရှေးမြန်မာမင်းများ အဆက်ဆက်မှာ တိုင်းပြည်အကျိုးကို ကောင်းတဲ့ဘက်ကနေ ကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဆိုတာ သမိုင်းက သက်သေပြနေတာကြောင့် အပိုတွေ ပြောဖို့ လိုမယ် မထင်ပါ။ မွတ်စလင်မ်တွေဟာ မြန်မာမင်းများလက်ထက်မှာ တာဝန်ကျေခဲ့တဲ့အပြင် နယ်ချဲ့တော်လှန်ရေးနဲ့ လွတ်လပ်ရေး တိုက်ပွဲတွေမှာလည်း အင်တိုက်အားတိုက် ပါဝင်ခဲ့ပြီး အသက်ကိုပင် ပေးဆပ်ခဲ့တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာ အားလုံးသိတဲ့ ကိစ္စတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေမှာ မေးစရာတစ်ခုတော့ ရှိလာမှာပါ။ ဒါကတော့ အရင်ကလူတွေ လုပ်ခဲ့တာ မင်းတို့နဲ့ ဘာဆိုင်သလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းပါ။ ဒါကိုလည်း အခြေအနေ အမှန်ကို သဘောပေါက်အောင် ရှင်းပြပါမယ်။
ပါလီမန်ခေတ် ကုန်ဆုံးပြီး ဒီဘက်ခေတ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာ ဦးနေ၀င်းဦးဆောင်တဲ့ အိမ်စောင့်အစိုးရ ၊ တော်လှန်ရေးကောင်စီ (မဆလ) ခေတ် စတဲ့ ကာလတွေမှာတော့ ဦးနေ၀င်းဟာ မွတ်စလင်မ်တွေကို တိုင်းပြည်ထူထောင်ရေးနဲ့ အကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေမှာ ပါဝင်လာခြင်း မရှိအောင် စနစ်တကျ အကွက်ချပြီး ဖယ်ရှားခဲ့ပါတယ်။ ယုတ်စွအဆုံး အားကစား လောကမှာတောင် ယခင်က မြန်မာ့အားကစား လောကကို မွတ်စလင်မ်တွေက ဂုဏ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ သမိုင်းကို အလေးမထားဘဲ ဖယ်ကြဉ်ခဲ့တဲ့အထိ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီ့ထက်ပိုဆိုးတာက မြန်မာ့သမိုင်း တစ်လျှောက်လုံးမှာ မွတ်စလင်မ်တွေဟာ ပသီလူမျိုး၊ ဇေရဘာဒီလူမျိုး ၊ မြန်မာမွတ်စလင်မ် စတဲ့ အမည်မျာနဲ့ တိုင်းရင်းသားအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းခံခဲ့ရပေမယ့် ၁၉၈၂ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေမှာ မွတ်စလင်မ်တွေကို တိုင်းရင်းသားအဖြစ်က ဖယ်ရှားပြီး ဦးနေ၀င်းဟာ တပါတီအာဏာရှင်စနစ်နဲ့ မိမိစိတ်ကြိုက်ပုံဖော်ခြင်း ပြုခဲ့ပါတယ်။
ဒီလို အခြေအနေတွေကြောင့် မွတ်စလင်မ်တွေဟာ ၀မ်းနည်းကြေကွဲစွာနဲ့ တိုင်းပြည်အကျိုးပြု လုပ်ငန်းတွေမှာ ပါဝင်ခွင့် မရခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
မွတ်စလင်မ်တွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံ အကျိုးကို သယ်ပိုးခဲ့တဲ့ သမိုင်းသာ ရှိခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံတော် ပျက်စီးအောင် ပြည်သူလူထု အကျိုးယုတ်အောင် မည်ကဲ့သို့မျှ လုပ်ဆောင်ခြင်း မပြုခဲ့ဘူးဆိုတာ စစ်မှန်တဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေ အားလုံးသိကြပါတယ်။
ဒါကြောင့်လဲ တစ်ချိန်က ဗုဒ္ဓဘာသာစစ်စစ် မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်တွေဟာ မွတ်စလင်မ်တွေကို လေးစားသောအားဖြင့် မြန်မာထဲက မြန်မာလူမျိုး တစ်မျိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ်လို့တောင် သတ်မှတ်ခြင်း ပြုခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီကနေ့ အင်တာနက်ထဲမှာ မွတ်စလင်မ်တွေကို တစ်တစ်ခွခွ၊ ပယ်ပယ်နယ်နယ်၊ ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်း ဝေဖန်ပုတ်ခတ်သူတွေဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာလူမျိုးစစ်စစ် မဟုတ်လောက်ပါဘူး။ ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာလူမျိုးစစ်စစ်ဟာ သူတစ်ပါး ထိခိုက်နစ်နာအောင် စိတ်နဲ့တောင် မပြစ်မှားကြတဲ့ ရိုးသားတဲ့ ဗီဇစရိုက်ရှိတဲ့ လူမျိုးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ဝေဖန်တိုက်ခိုက်သူတွေဟာ လူတစ်စုထံက အခကြေးငွေယူပြီး တာဝန်ကျေအောင် လုပ်နေကြရတဲ့ အဆဲပါရဂူဘွဲ့ရတဲ့ အခစားဝန်ထမ်းတွေသာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ဟာ ဒီလူတွေရဲ့လုပ်ရပ်ကို အလေးထားပြီး ပြန်လည်တုန့်ပြန်ခြင်း မပြုသင့်ပါဘူး။
ကျွန်တော်တို့မွတ်စလင်မ်တွေဟာ သင်ကောင်းကောင်း၊ မကောင်းကောင်း၊ ကျွန်ုပ်ကောင်းမည်ဆိုတဲ့ မူအပေါ်မှာပဲ မိမိတို့ ရပ်တည်သင့်ပါတယ်။ အ၀ီစိငရဲကို သွားဖို့ အကုသိုလ်လမ်းကို လျှောက်နေတဲ့သူတွေကိုတော့ ပြန်လည်တုန့်ပြန်ခြင်းမပြုဘဲ သိက္ခာရှိရှိ လမ်းဖွင့်ပေးလိုက်ပါ။ သူတို့ရဲ့ အဆဲသမိုင်းကို သူတို့ရေးကြပါစေ။
ကျွန်တော် အဓိက ပြောချင်တာကတော့ မွတ်စလင်တွေဟာ မျိုးရိုးဗီဇအရ ရိုးသားသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းပြည်နစ်နာအောင် ပြည်သူထိခိုက်အောင်လုပ်တတ်တဲ့ အကျင့်စရိုက် လုံးဝမရှိကြပါ။ မွတ်စလင်မ်တွေရဲ့ ဗီဇစရိုက်ကို ယေဘုယျသဘောအရ ထင်သာမြင်သာ ရှိတာလေးတွေကို အနဲငယ် ရှင်းပြလိုပါတယ်။
၁။ ဘိန်းနဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါး ကုန်မကူးပါ။ ရောင်းချခြင်း မပြုပါ။
၂။ လူကုန်မကူးပါ (ဘ၈င်္လားဒေ့ရ်ှကလည်း လူကုန်မ၀ယ်ပါ)
၃။ စားတော်ဆက် အမည်တပ်၍ အရက်သေစာ ရောင်းချခြင်း မပြုပါ။
၄။ တည်းခိုခန်း (INN) အမည်တပ်၍ ဇိမ်ခန်း မဖွင့်ပါ။
၅။ လောင်းကစားဒိုင်များလုပ်၍ လူငယ်တို့၏ စာရိတ္တကို မဖျက်ဆီးပါ။
၆။ မာဆတ်ဟုခေါ်သော နှိပ်စားဂွင်မလုပ်ပါ။
၇။ ကာရာအိုကေ အမည်တပ်၍ မိန်းမပျိုများကို ပျက်စီးစေသော အလုပ်ကို မလုပ်ပါ။
၈။ မြောင်းဆီများကို ပဲဆီအမည်တပ်၍ ထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်း မပြုပါ။
၉။ လူကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေသော ဆေးဝါးအတုများ ထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်း မပြုပါ။
၁၀။ လူကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေသော ခြင်ဆေးများ ထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်း မပြုပါ။
၁၁။ ကလေးသူငယ်များ အန္တရာယ် ဖြစ်စေသော သကြားလုံး၊ နို့မှုန့်များနှင့် မုန့်ပဲသွားရေစာများ ထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်း မပြုပါ။
၁၂။ Asbestos သတ္တုပါဝင်သော လူကို အဆုတ်ကင်ဆာ နှင့် အခြားရောဂါဝေဒနာများ ဖြစ်စေနိုင်သော မော်တော်ယာဉ်များ
ထို့အပြင် အစ္စလာမ် ဘာသာက ကြီးလေးသော အပြစ်ရှိသည့် (ဟရာမ်) အဖြစ် တားမြစ်ထားသော အောက်ပါ အကြောင်းအရာများနှင့် လုပ်ငန်းများကိုလည်း ရှောင်ကြဉ်ကြပါသည်။
၂။ စားသောက်ကုန် ပစ္စည်းများ သိုလှောင်ခြင်း
၃။ ဆင်းရဲသားများကို ခေါင်းပုံဖြတ်၍ အတိုးစားခြင်း၊ အပေါင်ခံခြင်း
၄။ လူကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေသော (ပုပ်သိုးနေသော အစားအစာ) များရောင်းချခြင်း မပြုကြပါ။
၅။ အလေးခိုးခြင်း၊ ရေထိုးခြင်း မပြုကြပါ။
၆။ ဘာသာမတူသူများအား ဝေဖန် ပုတ်ခတ် စော်ကားခြင်း မပြုရပါ။
၇။ အခြားဘာသာဝင်များ၏ သာသနိက အဆောက်အအုံများကို ဖျက်ဆီးခြင်း၊ စော်ကားခြင်း မပြုရပါ။
၈။ မိမိနေထိုင်သော တိုင်းပြည်အပေါ် သစ္စာစောင့်သိ ရိုသေရပါသည်။
၉။ လူသားမျိုးနွယ်အားလုံးကို တအူတုံဆင်း အိမ်ထောင်စု စာရင်းဝင်များဟု မှတ်ယူကြပါသည်။
ဤသည်မှာ အစ္စလာမ်သာသနာ၏ အဆုံးအမ နှင့် လမ်းညွှန်မှု များ ဖြစ်ပါသည်။
(ချွင်းချက်အနေနှင့် ပြောစရာ တစ်ခု ရှိပါသည်။ အစ္စလာမ် သာသနာသည် ကျူးကျော်စစ်ကို လုံးဝ တားမြစ်ပြီး ခုခံစစ်ကိုမူ ခွင့်ပြုထားပါသည်။)
လူမျိုး ဘာသာအသီးသီးတွင် စုန်းပြူးများ ရှိတတ်ကြပါသည်။ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်အမည်ခံ တစ်ဦးစ နှစ်ဦးစ မှ ဘာသာတရား၏ အဆုံးအမများကို ဖောက်ဖျက် ကျူးလွန်သူများ ရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မည်။ သို့သော် မည်သည့်ကိစ္စရပ်ကိုမဆို ရာခိုင်နှုန်း နှင့် တွက်ဆရသည်ကို စာပေဗဟုသုတ ရှိရုံမျှနှင့် သိနိုင်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် အချုပ်အားဖြင့် ပြောရလျှင် မွတ်စလင်မ်ဆိုသူများသည် ရိုးသားခြင်း၊ ဂတိတည်ခြင်း၊ သစ္စာစောင့်သိခြင်း။ တပါးသူ မနစ်နာအောင် စောင့်ထိန်းသော ဓလေ့စရိုက် ရှိသူများအဖြစ် သုံးသပ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ မွတ်စလင်မ်တို့၏ တရားတော်အရ မိမိနေထိုင်သော တိုင်းပြည်ကို စူးစူးနစ်နစ် ချစ်မြတ်နိုး ရပါသည်။ အတူယှဉ်တွဲ နေထိုင်သော လူမျိုးများကို မြတ်မြတ်နိုးနိုး လေးစားချစ်ခင်ရပါသည်။ ဤသို့ ပြောဆိုခြင်းကြောင့် သင်က ပြန်လှန် ပြောဆိုပါဦးမည်။
ဒီလိုဆို တိုင်းတိုင်းရင်းသား ပေးရတော့မှာလား ဟု မေးလာလျှင် ကျွန်ုပ်က တစ်ခုပဲ ပြန်ဖြေပါမည်။ လက်တွေ့ အခြေအနေအရ တိုင်းရင်းသား ဖြစ်တော့ရော ဘာတွေများ ထူးလာမှာလဲ ဟုသာ ဖြစ်ပါသည်။
ဒီကနေ့ တိုင်းရင်းသားများ ဖြစ်ကြသော ကချင် စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များ၊ ဧရာဝတီတိုင်း၊ ပဲခူးတိုင်း၊ကရင်ပြည်နယ်မှ ရေဘေးဒုက္ခသည်များ၊ လယ်မြေများကို မတရား သိမ်းဆည်းခံရ၍ ဆန္ဒထုတ်ဖော်နေသော တိုင်းရင်းသားများ အနှစ် ၂၀ ကျော် နေထိုင်ပြီးကာမှ ကျူးကျော်ဟု ဆိုကာ ဖယ်ရှားခံရ၍ ခြေသလုံးအိမ်တိုင် ဖြစ်နေသော မိသားစုများ၊ လုပ်ခ လစာနည်း၍ စားဝတ်နေရေး ကြပ်တည်းနေကြသော မြန်မာ အလုပ်သမများ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်မှ အိုးအိမ်ဖျက်၍ ဒုက္ခခံစားနေကြရသော သက်ကြီးရွယ်အိုများ၊ လူမမယ်ကလေးသူငယ်များ၊ ကျန်းမာရေး ချို့တဲ့နေကြသော ဝေဒနာသည်များ စသည်ကဲ့သို့သော တိုင်းရင်းသား ညီနောင်များကို သင် ဘယ်လောက် ကူညီနိုင်ပြီလဲဟု ၀မ်းနည်းစွာနှင့် မေးရန်သာ ရှိပါသည်။
ဧရာဝတီတိုင်းတွင် နာဂစ်ဝင်မွှေစဉ်က လေဘေးဒုက္ခသည်များကို မွတ်စလင်မ်များ မည်မျှအတိုင်းအတာအထိ ကူညီခဲ့ကြသည်ကို ဧရာဝတီတိုင်းသားများ သိကြပါသည်။
ယခုအခါတွင် ဘာသာ၊ လူမျိုး၊ အရောင်အဆင်း မခွဲခြားဘဲ ဘာသာတရားတိုင်းမှ လမ်းညွှန်သော မေတ္တာတရားကို အခြေခံလျှက် လူသားဝါဒဆန်ဆန် ကိုယ်ချင်းစာစိတ်ဖြင့် လူသားအရင်းအမြစ်ကို တန်ဖိုးထား၍ စုပေါင်းလက်တွဲပြီး ကူညီကြမည်ဆိုပါလျှင်
မွတ်စလင်မ်တို့သည်လည်း စိုသောလက် မခြောက်မီ၊ ဆန့်သောလက် မကွေးမီ သစ္စာတရား၏ အတိမ်အနက်၊ မေတ္တာတရားကို ချိန်စက်ပြချင်ပါသည်ဟုသာ ပြောလိုပါသည်။
(မှတ်ချက်) လူမျိုး တစ်မျိုး၏ ဂုဏ်သိက္ခာ သတင်းသည် ထိုလူမျိုး၏ ပြုမူပြောဆို ဆက်ဆံခြင်းပေါ်တွင်သာ တည်ပါသည်။ နယူတန်၏ သီအိုရီ အရ ဖြစ်စဉ်တိုင်းတွင် တန်ပြန် သက်ရောက်မှု ရှိသည်ကို သတိပြုပါ။
Posted: 02 Sep 2012 05:56 AM PDT
Source: Muslim acceptance in Laos stark contrast to Myanmar intolerance
The imams of two mosques in Vientiane tell of fair treatment from the communist authorities, while expressing sadness and frustration at the treatment of Rohingya in the country next door Published: 2/09/2012
Just overadecade ago the tiny Islamic population of Laos, like Muslims everywhere, watched on in horror as al-Qaeda carried out its suicide attacks on New York and Washington. They were then flabbergasted asatide of Western opinion turned on them.PEACEFUL COEXISTENCE: Muhammad Vina bin Ahmad Imam of the Azhar Mosque says his congregation has good relations with the Lao government.
Posted: 02 Sep 2012 06:03 AM PDT
Kenyataan itu disiarkan The New Straits Times (NST) pada 29 Mei bertajuk "Kelantan Misused RM600m in Loans" dianggap tidak benar, memfitnah kerana menuduh plaintif menyalahguna sebahagian dana RM600 juta membiayai perjalanan di luar negara oleh pegawai-pegawai kerajaan negeri.
Azmi dalam kenyataan itu mendakwa mereka yang turut serta dalam perjalanan tersebut termasuk anggota Exco dan beberapa pegawai kerajaan negeri serta wakil AKSB.
AKSB dalam tuntutannya menyebut Azmi bersama empat lagi defendan bertanggungjawab menyebabkan tersiarnya artikel tersebut, di mana secara jelas menyebut berita tidak benar dan tidak berasas dikaitkan dengan plaintif.
Turut dinamakan sebagai defendan iaitu MTRK; Pengarang Urusan Kumpulan NST, Abdul Jalil Hamid; Penyunting Kumpulan NST, Syed Nadzri Syed Harun dan New Straits Times (M) Bhd.
Peguam plaintif, Hisham Fauzi berkata, kes terbabit ditetapkan untuk pengurusan kes sebelum bicara pada 19 September ini. Defendan belum lagi melantik peguam.
Hisham berkata, tulisan yang disiarkan akhbar tersebut secara jelas bermaksud bahawa plaintif terlibat dengan korupsi sehingga gagal dalam tanggungjawab menggunakan wang pinjaman tersebut.
Sebelum ini plaintif melalui peguamcara mengemukakan notis tuntutan kepada defendan-defendan menuntut supaya menarik balik artikel tersebut, memohon maaf secara terbuka kepada plaintif dan membayar gantirugi.
Namun defendan-defendan enggan berbuat demikian dan tidak mahu memohon maaf secara terbuka dan membayar ganti rugi.
Selain itu plaintif juga menuntut defendan menyiarkan permohonan maaf tersebut sebagai berita utama di muka surat hadapan dalam NST, mengiklan permohonan maaf tersebut dalam akhbar Utusan Malaysia atau Berita Harian.
AKSB juga menuntut ganti rugi teladan, ganti rugi melampau, ganti rugi punitif. -HD
၁၀ ပါး အကျိုး မျှော်ကိုးခဲ့ကြပါလေသည်။
အိမ်အနားကခွေး ကိုယ်မမွေးလည်း (လဲ)
မှတ်မိရဲ့လား အို မြန်မာ…..။
တစ်ချိန်တုန်းက အို မြန်မာ….။
အကျည်းတန်ခဲ့ ရုပ်ဆိုးခဲ့ပေါ့ ပြည်မြန်မာ ။
Source: MMSY – မြန်မာ့ ဂုဏ်သိက္ခာတံခါး ကျိုးပေါက်ခြင်း (ကဗျာ)
Posted: 02 Sep 2012 05:02 AM PDT
"Jelajah itu juga adalah kesinambungan 20 siri program Merdeka Rakyat yang diadakan sejak tiga bulan lalu.Ramai pemimpin PKR Pusat akan terlibat dalam siri jelajah itu dan mereka akan berada di Pahang, Kelantan, Kedah dan Perlis," katanya.
Patutlah bas tersebut disimbah cat merah dan dipecahkan cermin. Rupa-rupanya ada pihak yang resah-gelisah kerana rombongan bas berkenaan telah menarik perhatian orang ramai.
According to the Urban Dictionary, "Gangnam Style" isaKorean neologism mainly associated with upscale fashion and lavish lifestyle associated with trendsetters in Seoul's Gangnam district (강남), which is considered the most affluent part of the metropolitan area. In colloquial usage, it is comparable to the English slang terms "swag" or "yolo".
Watch the following video which has had more than 88 MILLION views since July 15, 2012!!
The song's phenomenal success is largely due to the music video's mass appeal, especially the signature dance move known as "the horse-riding dance" which combines the stylistic elements of shuffle dancing and hand movements resembling the posture ofahorseback rider. Previously, another Korean K-pop girl group Girl's Day had already introduced this dance move through their 2010 debut single.
Surprisingly, even high-profile celebrities and musicians on Twitter, including British pop singer Count Robbie Williams, American rapper T-Pain and American singer Josh Groban have shown interest in it. Even Britney Spears is into this song and dance.CLICK HERE for more interesting comments from celebrities.
On August 14th, PSY releasedaspin-off version of the song and the music video starring Hyun-A,amember of the K-POP group 4Minute who appeared in the original music video as PSY's muse in the subway. Titled "Oppa Is Just My Style," the music video sets itself apart by putting the female pop singer on the center stage and removing the original chorus "Gangnam Style" altogether. Some have perceived it asafemale version of 'Gangnam Style'. For sure, Hyun-A is VERY sexy in this video!!!!!!!!!!!
In tribute to PSY's "Gangnam Style," dozens of music video parodies have been created such as regional Korean parodies including "Daegu Style" and "Hongdae Style" to lip-synched tributes created by K-POP music fans in Singapore, the United States and many other countries! And soon, I hope to upload Penang's very own version of "Gangnam Style" performed by disabled friends who love music and the joy of grooving to beautiful music in togetherness!
2. Wall Street Journal: Evan Ramstad's What's Up With the 'Gangnam Style' Video?
Posted: 02 Sep 2012 02:02 AM PDT
Posted: 01 Sep 2012 11:09 PM PDT
During the darkest days of the dictatorship, after the arrests of most secular political leaders in the 1990s, it was the monks who led resistance to the junta. These "sons of Buddha" could organize discreetly inside their monasteries and spread pro-democracy, anti-regime sentiments to the people. Perhaps the most charismatic was Ashin Gambira, now 33,aleader of the Saffron Revolution. After the junta crushed the uprising, Gambira's monastery in Yangon was shut down and the monk was arrested and sentenced to 63 years in prison. He withstood four years of torture and beatings and was freed on January 13. Gambira promptly resumed his harsh critiques of the government.
He then broke into three monasteries that had been sealed by the army in 2007 and also traveled to Kachin State in northern Myanmar to draw attention to human-rights abuses allegedly being carried out by the army inawar against ethnic separatists that resumed last year aftera17-year cease-fire. Both times he was released afteranight in jail.
The physical and mental strain of prison life, along with continued harassment, tookaheavy toll on Gambira. In March he reportedly sufferedanervous breakdown. The monk left the monastery, returned to layman status and moved in with his mother near Mandalay. "He does not want to speak to anybody," she told me when I called. "He is not in good mental condition." Gambira's plight, supporters say, isareminder of the tenuous nature of the government's liberalization.
I visited Gambira's former monastery, newly reopened, tucked away inaleafy section of Yangon. The golden spires of an adjacent temple poked aboveadense grove of coconut palms and banana trees. Sitting cross-legged on the veranda of his dormitory, the abbot, alsoaformer political prisoner, told me that the monastery is still trying to recover after the devastation inflicted by the military. At the time it was forcibly shut in 2007, "there were 18 monks,adozen HIV patients and three orphans living here. Most have disappeared." I asked if he was grateful to Thein Sein for the reopening. "I do not need to thank this military government for returning what belongs to us," he told me. He was bitter about the treatment of Gambira, whom he consideredaprotégé. "Gambira was moved to many prisons and tortured. He has not been right since."
He now resides with 15 monks inarural compound donated byasupporter. "We are out of touch here," said the moon-faced, pudgy monk, as we gazed out on fallow fields fromathatched-roof structure, its bamboo walls decorated with photographs of Pyinna Thiha with The Lady. "Things are changing in Myanmar," he said. "But one thing has not changed, and that is religion."
Monks are the biggest potential organizing force in Burmese society, he explained; the government remains fearful of them. The council, he says, serves as "a puppet" of the regime, its members corrupted by privileges. "They get houses, cars," he told me. "This is not Buddhism. This is luxury."
Read more: http://www.smithsonianmag.com/people-places/Aung-San-Suu-Kyi-Burmas-Revolutionary-Leader-165590706.html#ixzz25I1lSmpw
The Best Letter From Ashin Gambhira, Safron revolution leader about the Rohingya conflict (drkokogyi.wordpress.com)
Posted: 01 Sep 2012 11:11 PM PDT
Kerajaan PR Selangor telah menerima tekanan daripada pemimpin BN kerana dikatakan membelakangkan Sultan Selangor apabila tidak menjemput baginda dalam sambutan ambang Kemerdekaan di Shah Alam pada malam Khamis lalu. -TMI
Jika Datuk Seri Anwar Ibrahim dikatakan tidak mempunyai locus standi untuk dijemput ke Majlis Sambutan Merdeka Negeri Selangor, apa locus stadi yang Rosmah Mansor ada untuk berada di pentas sambutan Merdeka oleh kerajaan Pusat di Dataran Merdeka?
Sejak bila Rosmah Mansor dipilih oleh rakyat atau dipilih untuk berada di dalam barisan kabinet Kerajaan Barisan Nasional?
Rosmah Mansor tidak ada jawatan penting di dalam kerajaan tetapi hanyalah seorang Penaung Permata Negara. Apakah Rosmah lebih besar dari Agong?
Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah telah pun mencemar duli menyertai Majlis Bacaan Yasin dan Tahlil sempena Sambutan Hari Kemerdekaan ke-55 yang turut disertai Menteri Besar, Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim. Setiausaha Kerajaan Negeri, Datuk Mohammed Khusrin Munawi, Mufti Selangor, Datuk Mohd Tamyes Abdul Wahid Pengarah Jabatan Agama Islam Selangor (Jais), Datuk Marzuki Husin dan Pengerusi Majlis Agama Islam Selangor (Mais), Datuk Mohamad Adzib Mohd Isa.